मेवाहाङको प्राचीन स्थल मेवाखोला - Dr. Nawa Raj Subba
2019-08-17 Dr. Nawa Raj
माथिको चाखलाग्दो ऐतिहासिक घटनाप्रति यो लेखकको कुनै बिमति छैन । तर त्यसअघि यो खोलाको नाम के थियो त? किनभने मुदेन्छङ साँबा दिगर्चा ल्हासाबाट नेपालमा प्रवेश गरेको काल र माराङहाङको लिम्बूवान चढाई अंशुबर्मनको देहान्तपछि (सन् ६४०) सातौं शताब्दीमा भएको हो । इतिहासकार इमानसिंह चेमजोङ अनुसार लिम्बू दशसरदारले किरात राज्यका भुईफुट्टा आठराई शासकलाई दखल गरेर दशलिम्बूवान स्थापना गरेको समय त्योभन्दा करिव एकशताब्दी अघि छैटौं शताब्दीमा हो । इतिहासमा छैटौं शताब्दीमा दश लिम्बुवानका विभिन्न थूम गठनगर्ने क्रममा ‘मेवाखोलामा सिरेङहाङले राज्य गरे’ भनिएको छ । यसरी सातौं शताब्दी माराङहाङको शासनकाल अर्थात् मुदेन्छङको लिम्बूवान आगमनपूर्व सिरेङहाङले मेवाखोलामा राज्य गरेको इतिहासले देखाउँछ । मुदेन्छङ आउनुपूर्व मेवाखोला नामाकरण भइसकेको इतिहासले बताउँछ । यसर्थ, वंशावलीमा मुदेन्छङ् साँबाको मिक्वाखोला भन्ने बुझाई ऐतिहासिक घटना भएपनि यसअघि नै उक्त खोला मेवाखोला नामले बगेको बुझिन्छ ।
यसकारण मेवाखोलाको नाम आँशु अर्थात् दुःखपूर्ण यात्राको द्योतक भएको मान्न सकिएला तर यसको ऐतिहासिकता खोजेर यसको नाम कुन राजा वा कुन वंशसित सम्बन्धित थियो भनेर जिज्ञाशा अझै बाँकी रहन्छ । उसोभए लिम्बूवान गठन छैटौं शताब्दीपूर्व नै मेवाखोलाको नामाकरण कसरी भयो होला? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा एक किराती दन्त्यकथा र यसलाई समर्थन गर्ने वंशावलीले केही बताउँछन् । किराती दन्त्यकथाबाट मेवाखोला नामाकरणको संकेत पाउन सकिन्छ ।
एक किराती लोककथा  अनुसार उहिले रोदु किरातका सन्तानहरु मध्ये खम्बुहाङ र मेवाहाङ बराहक्षेत्रबाट छुट्टिएर तम्बरको शिरतर्फ उँभो लागे । उनीहरुले साथमा आफ्ना बाख्रा पनि लगेका थिए । उनीहरुले आफ्नो प्रमुख हतियार धनुवाण पनि बोकेका थिए । खम्बुहाङ पहिले बाटो लागे । उनी उँभो लाग्दा बाटोमा अचानक खोलुङ (खोवालुङ) भन्ने स्थानमा पुग्दा बाटो अबरुद्ध भयो । खम्बुहाङले मलाई अघि जान देऊ भनेर खोलुङ देवलाई पूजा गरे । खोलुङले पनि मलाई भोग नदिई जान दिन्न भने । खम्बुहाङले वरिपरि हेर्यो र एउटा रुखमा माङ्खो चरो देख्यो । धनुवाणले त्यही चरालाई मारी झारेर त्यसैको भोग खोलुङलाई दिए । त्यसपछि उनको बाटो खुल्यो र उनी अघि बढे ।
पछि मेवाहाङ पनि दाजुलाई पछ्याउँदै त्यहाँ आइपुगे । उनलाई पनि खोलुङदेवले त्यसरी नै अवरोध गरे । उनले दाजुलाई सोधे– “दाजु ! यो खोलुङ तिमीले कसरी तर्यौ? मलाई पनि उपाय बताईदेऊ न !” तर किन हो, भाग खोस्न आएको सम्झे कि किन दाजु खम्बुहाङले मनमा पाप चिताए । उनले भाइलाई सही कुरा बताउनुको सट्टा उल्टो कुरो बताइदिए । उनले भाइलाई आफ्नी कान्छी चेलीको कान्छीऔंला काटेर भोग चढाइ दिएको र बाटो खुलेको भनेर ढाँटिदिए । भाइले दाजुको कुरा विश्वास माने । भाइ मेवाहाङले दाजु खम्बुहाङको सल्लाह बमोजिम आफ्नी गर्भवति कान्छी बहिनीको कान्छीऔंला काटेर खोलुङ्देवलाई भोग चढाए । औंला काटेपछि बहिनीको हातबाट धेरै रगत बग्यो । हातबाट त्यसरी बगेको रगत बाख्राले चाट्न थाल्यो । आखिर रगत धेरै बगेर बहिनीको मृत्यु भयो । त्यसरी बहिनीको रगत बाख्राले चाटेकाले अब उप्रान्त मेवाहाङ र उनका सन्तानले बाख्राको मासु नखाने संकल्प गरे । फलस्वरुप आज पनि कतिपय किराती राई र लिम्बूले बाख्राको मासु खाँदैनन् ।
बहिनीको मृत्युपछि मेवाहाङ दुःखी भए र कुरो बुझेपछि दाजुसंग चित्त दुखाए । उनी त्यहाँबाट अरुणनदीको शिरतिर अघि बढे । उनी तिब्बत पुगेर केही समय बसे । मेवाहाङले गेल्जुम्मा हिमालको फेदमा मृग देखे । मृग शिकार गर्दै उनी त्यहाँबाट किरात देश झरे । उनी संखुवासभा हुँदै भोजपुर पुगे । उनले मृगको मुटु कलेजो (राई भाषामा शिली) र एक हिमाल (चुङ) लाई चढाए । यसरी यो शिलिचुङ हाल भोजपुर जिल्लामा पर्दछ, भनी एक किराती दन्त्यकथा बताउँछ ।
माथिको लोककथा किरात राईमा प्रचलित एक आख्यान हो । यही आख्यानको आधारमा मेवाहाङको शिकार गर्ने क्षेत्र अरुण बरुण क्षेत्रमा मेवाखोला पनि रहेको हुँदा लोककथामा वर्णित मेवाहाङको नामबाट मेवाखोला नाम रहेको हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसबेला अरुण–बरुण क्षेत्र किरातीहरुको क्रिडास्थल नै भनेर साँबाको तुङ्दुङ्गे मुन्धुम पनि बताउँछ । मेवाहाङ्बाट मेवाखोला रहनगएको हुनसक्ने परिकल्पनालाई पुष्टि गर्ने आधार खोज्दै जाँदा रोदु किरातको वंशावली सहायकसिद्ध भएको छ । उक्त वंशावलीले खम्बुहाङ (जेठो) र मेवाहाङ (माइलो) दाजुभाइ भएको पुष्टि गरेको छ । खम्बुहाङबाट हालका चाम्लिङ, बान्तवा लगायतका विभिन्न राई र मेवाहाङबाट मेवाहाङ, लोहोरुङ, याम्फू, याक्खा र अठप्रे राई भएको वंशावलीले बताउँछ । त्यसैगरी साईलो मेत्नाहाङबाट लिम्बू, काईला आङ्लेवाबाट सुनुवार र कान्छा मेरातीबाट धिमाल, मेचे र नागा भएको रोदु किरात वंशावलीले बताउँछ । यसर्थ मेवाहाङ प्राचीन पुर्खा भएको र उनका सन्तान हाल सोही क्षेत्र र वरिपरि फैलिएको हुँदा मेवाखोला नामाकरणमा लिम्बूका दाजु किराती पुर्खा मेवाहाङको नामसित जोडिएर खोलाको नाम पनि मेवाखोला रहन गएको परिकल्पनालाई वंशावलीले समर्थन गर्दछ ।
यति मात्र हैन दन्त्यकथा र वंशावली तथा मुन्धुमले निम्न कुरा पनि समर्थन गर्दछ । (१) राई, लोहोरुङ, याम्फू, याक्खा, अठप्रे राई, लिम्बू, सुनुवार, धिमाल, मेचे र नागाका पुरख्यैाली हाँगा वंशक्रमको दृष्टिले नजिक छन् । (२) मेवाखोला क्षेत्रमा मेत्नाहाङ (लिम्बू) भन्दा अघि दाजु मेवाहाङ पुगेका थिए । (३) राई (खम्बु) बाट लिम्बू (याक्थुङ) भएको तथा राई र लिम्बू एकै हुन् भन्ने तर्कलाई पनि यसले समर्थन गरेको छ ।
मुन्धुम, लोककथा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई अंग्रेजीमा फोकलोर (Folklore) भनिन्छ । लोककथा त्यसै निर्माण भएका छैनन् । एक निश्चित घटनाका आधारमा यिनीहरुको निर्माण भएको छ । इतिहास, सत्यतथ्य र उपकारी सन्देश सम्प्रेषण गर्नलाई नै लोककथाको निर्माणको अभिप्राय भएको विद्वानहरुको मत पाइन्छ । Folklore एक वैज्ञानिक विधा हो जसले लोककथाको निर्माणारम्भ, साजसज्जा, अभिप्राय के हो भनेर अध्ययन गर्ने गर्दछ । लोकसाहित्य भित्र आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, र आर्थिक मूल्य र मान्यतालाई समेटिएको Allegorical, Romantic, Comparative, Folkloric, Functionalist, Structuralist, Formalist तत्वहरु हुन्छन् । एउटा महत्वपूर्ण कुरो के छ भने कथालाई नबिर्सने र लोकप्रिय बनाउन गहिरो अर्थ दिने शब्द रुपक (Metaphore) को प्रयोग लोककथामा हुन्छ । लोककथामा भ्यागुत्ता उफ्रदैन बोल्छ, मानिसझैं हिड्छ, ढुँगा, रुखपात पनि बोल्छ । यसैले लोकसाहित्यमा विद्यमान विभिन्न सांकेतिक अर्थको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । यसैले लोककथालाई इतिहासको प्रमाणको रुपमा हुबहु लिन सकिन्न केवल यसलाई आधार वा संकेत बुझ्नु पर्दछ ।
भाषालाई पनि रोग लाग्दो रहेछ भनेर विभिन्न भाषाका तुलनात्मक अध्येता प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक Friedrich Max Muller ले भनेका छन् । उनले पुराना ग्रन्थहरुमा पाइने शब्दको अर्थ हाल बद्लिएको पाए । उनले विभिन्न स्थानमा एक शब्दको बेग्लाबेल्लै अर्थ भएको पाए । शब्दको अर्थविस्तार भएको एउटा सानो उदाहरण नेपाली शब्द ‘तेल’ भन्नाले आरम्भमा तोरीको खानेतेल मात्र बुझिन्थ्यो, अहिले तेल भन्नाले पेट्रोल लगायत अखाद्यतेल पनि यसले बुझाउँने गर्दछ । शब्दार्थको कुरा पनि सान्दर्भिक नै होला । जस्तै– ‘बलबहादुरले सिलटिम्मुर खायो’ भनेको बलबहादुर मर्यो । यद्यपि ‘सिलटिम्मुर’ को अचार खाइन्छ, औषधी बनाएर मानिस र जनावरलाई खुवाइन्छ । सामान्यतः यही शब्दले मानिस मर्यो भन्ने अर्थ बोकेको हुन्छ । मानिस मर्यो भन्ने शब्दको यो विशेष अर्थलाई हामी लक्षणा अर्थ भन्दछौं । खाद्यवस्तु वा औषधीय वस्तु भन्ने बुझाउने यसको सिधा अर्थलाई अभिधा अर्थ भनिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरो संचारको सिद्धान्त अनुसार प्रेषक–माध्यम–प्रापक (Communication cycle) चक्रमा उत्पन्न हुने बाधा (Noise) उत्पन्न भएमा एककान–दुईकान मैदान हुँदा लोकसाहित्य पनि अपभ्रंश हुन्छ र विविधता पाइन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ, एकजनाले आरम्भमा भनेको एकथोक कालान्तरमा कुरो मैदान हुँदा त्यो कुरो कत्ति बाङ्गिन्छ वा कुरै अर्कै भएर आउँछ । लेखकले लोककथालाई नबिर्सने गरी बनाउँछ । खोला बगेको वा कराएको जस्ता सामान्य कुरा भुलिन्छ, तर खोलाले मान्छेझैं गफ गरेर बोलेको कथा मानिसले हत्तपत्त भुल्दैनन् । हिमाल, समुन्द्र, तारा, घाम, जुन बोलेको कुरा मानिसले बिर्सदैनन् । त्यसैले यिनीहरु लोककथामा लोकप्रिय पात्र हुन्छन् । भन्न खोजेको कुरा, लोकसाहित्यमा प्रयोग हुने कुनै पात्र वा वस्तु कुन अर्थमा प्रस्तुत भएको छ त्यो अध्ययनकर्ताले बडो सावधानीपूर्वक खुट्याउनु पर्दछ । सूचना संचार–बाधाबाट उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थाको ज्ञान र ध्यान राख्नु पर्दछ ।
माथि वंशावलीमा दाजुभाइ लहरै देखाइएको छ । के यी एउटै आमा वा बाबुका सन्तान हुन् त? यसलाई त्यसरी बुझ्नु पनि ठिक हुँदैन । यसरी वंशावलीमा देखाइएको दाजुभाइको श्रृङ्खला बुझ्नलाई अलिकति पौराणिककाल र ऐतिहासिक कालतिर जानुपर्दछ । पौराणिक कालमा गैरवंशीय व्यक्तिलाई पनि आफ्नो वंशका तान्ने काम गरिन्थ्यो, यस्ता सन्तानलाई मानसपुत्र भनिन्छ । मानसपुत्रले पनि कुलवंश चलाउँछ । लिम्बू जातिका वंशावलीमा एकै बाबुका सन्तान मात्र दाजुभाइ भएका छैनन् । त्यहाँ दाजुभाइ बनाउने वा वंशभित्र ल्याउने काम पनि गरिएको छ । जसलाई वंशावलीमा वा बोलीचालीमा ‘मिसलभाइ’ भनेर चिनिन्छ । खम्बुहाङ र मेवाहाङ दुई भाइ एकै पिताका सन्तान हुन पनि सक्छन् नहुन पनि सक्छन् । किनभने यो विशाल परिवार वा समूहको कुरो हो । लोककथामा अघि जाने वा आउने दाजु र पछि जाने वा आउने भाइ भयो । यसैले माथि लोककथा र वंशावलीमा जेठो, माइलो, साईलो, काईलो र कान्छो भनेर जुन देखाइएको छ त्यो साँच्चीको जन्मले एकै पिताका जेठो, माईलो नभएर कुनै स्थानमा पहिले पुग्ने र पछि पुगेको आधारमा जेठो माइलो भएका परापूर्वकालका एकै पुर्खाका सन्तान हुन् जसलाई वंशावलीले सांकेतिक रुपमा समेटेको हुनसक्छ । खम्बुहाङ जसलाई खाम्बोक्मा वा भूमिपुत्र पनि भनिन्छ, यिनीहरुलाई गंगामैदानबाट आएका सन्तान काशीवंश वा काशीगोत्र पनि हुन्, तिनीहरु नै पहिले मेवाखोला क्षेत्रमा प्रवेश गरेको संकेत लोककथाले दिन्छ र जसलाई रोदु किरात वंशावलीले पनि समर्थन गर्छ । यता चङबाङ साँबा पोङमुन्धुम र फयङहाङ साँबाको पोङमुन्धुमले समेत उनीहरुका पुर्खा पनि उक्त यात्रापथमा तल्लिन रहेको उल्लेख गरेका छन् । भाषाविज्ञानले लिम्बू भाषाको बंश भोट–बर्मेली भाषा परिवारको उत्पत्ति, वितरण र परिवहनले आनुवंशिकी अध्ययनको आधारमा माथिका तथ्य पुष्टि भएका छन् ।
अन्तमा, मेवाखोला नामाकरण लगायत राई, लिम्बू पहिचानको सवालमा लोककथा, वंशावली तथा मुन्धुम महत्वपूर्ण स्रोत हुन् । जसरी कुनै जग्गाको क्षेत्रफल निकाल्दा छिमेकीका जग्गाहरुको सीमानालाई पनि आधार मानिन्छ , एकीन गर्नलाई एक भरपर्दो स्रोत मानिन्छ, त्यसैगरी राई, लिम्बू, याक्खा, याम्फू, धिमाल आदिले आफ्ना ऐतिहासिक अस्तित्व मापन गर्ने कार्यमा एकअर्काका प्राचीन साहित्य र ज्ञानको उपयोग गर्नै पर्दछ । नत्र अध्ययन अधूरो र एकलकाँटे हुन्छ । खोलाको नामाकरणमा जनजीब्रोले बोल्दा–लेख्दा जानीनजानी अपभ्रंश भएमा व्युत्पन्न हुने ध्वनि र शब्दलाई भाषाविज्ञान र इतिहासले स्वभाविक रुपमा स्वीकार्ला तर मौलिकताको नाममा दुराशयपूर्वक, रणनीतिक, राजनीतिक, र कोरा भावनाले यदि कुनै शब्द बुनिएको, चुनिएको वा लादिएको भए त्यो केवल क्षणिक हुन्छ किनभने त्यसलाई इतिहासले चिन्दैन र सबैले स्वीकार पनि गर्दैनन् । लोकसाहित्य वा मुन्धुमको अर्थ्याइ तर्कपूर्ण हुनुपर्दछ । यसमा अन्तर्निहित गहिरो भावको खोजी गरेर मात्र हामी सत्यनिकट पुग्न सक्छौं । हेक्का राखौं, लोककथा वा मुन्धुममा कतै ढुँगा बोल्यो अरे भनेर शब्दको गहिरो (लक्षणा) अर्थभित्र प्रवेश गर्न नखोजी सिधा (अभिधा) अर्थको पछिमात्र लाग्दा कतै कान हैन कागको पछि रोमाञ्चक दौडाई नहोस् ।
 Samba, Homu. Kirat Aitihasik Pristhabhumima Mudenchhong Samba Bangsawali. Edited by Homu Samba. 1st ed. Taplejung: Mudenchhong Samba Sewa Sangh Nepal, 2007.
 Rai, Rajesh. Kirati LokKatha Sangraha. Kathmandu: Nobel Kishor Rai, 2005.
 Thomrom, BhupDhwaj. Kulung Sanskritik Adhyayan. Kathmandu: The Mountain Institute, Kathmandu, 2001.
 Z. Jonathan Smith and Richard Buxton, “Myth,” Encyclopaedia Britannica, accessed August 17, 2019, https://www.britannica.com/topic/myth.
 Chemjong, Iman Sing. Kirat Itihas. 5th ed. Lalitpur: Kirat Yakthung Chumlung Lalitpur, 2003.